မြို့တော် Coronavirus အတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များအသစ် | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီမြို့တော် Coronary Virus အတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
မြို့တော် Coronary Virus အတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
18 / 03 / 2020 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, PHOTOS, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
မြို့တော် Coronavirus အတွက်အသစ်သောအစီအမံများ
Ankara Metropolitan မြူနီစီပယ် Coronavirus တိုက်ဖျက်ရေး၏နယ်ပယ်အတွင်း၎င်း၏အားလုံးယူနစ်နှင့်အတူတပ်လှန့်ခဲ့သည်။ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Mansur Yavas ၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်များကိုစတင်ခဲ့သည်။ Metropolitan မှပိုင်ဆိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှငှားရမ်းခကိုနှစ်လရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်။ Şefkat Evleri သည်ပိုးသန့်ဆေးရေးအစီအစဉ်တွင်နေ့စဉ်ပါ ၀ င်သော်လည်းမြို့တော်ပြဇာတ်ရုံများ၏မတ်လ Premieres များကိုနောက်ပိုင်းရက်တွင်ယူဆောင်ခဲ့သည်။ လူအစုအဝေးများမဖြစ်ပွားစေရန်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အသုဘအခမ်းအနားရှိသောနိုင်ငံသားများ၏အသုဘအခမ်းအနားကိုဆုတောင်းခြင်းကိုမစောင့်ဘဲပြုလုပ်လိမ့်မည်။ မြို့တော်သန့်ရှင်းရေးအသင်းများ; ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အကြားအာရုံခန်းမများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ သူနာပြုများနေအိမ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများ၊
Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် Metropolitan Municipality သည်ယူနစ်အားလုံးနှင့်အတူနိုးကြားနေသည်။
ကျန်းမာရေးညှိနှိုင်းရေးဘုတ်အဖွဲ့သည်ဒုတိယအတွင်းရေးမှူး Mustafa Kemal Çokakoğlu၏မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Mansur Yavaş၏ညွှန်ကြားမှုဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၄/၇ တွင်ပိုးသန့်ဆေးခြင်းနှင့်ပိုးသတ်ခြင်းလေ့လာမှုများကိုလိုက်နာသည်။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်မှုများကိုအဓိကထားသည့်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသည်အသစ်သောအစီအမံများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
သမ္မတ YAVA မှငှားရမ်းခလွယ်ကူသောနေရာများသို့
လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်များအပါအ ၀ င်မြို့ပြမျက်နှာပြင်များ၊ နဖူးစည်းစာတန်းများနှင့်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံသားများအားသတိပေးသည့်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသည်ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နေဆဲဖြစ်သည်။
Ankara Metropolitan မြို့တော်ဝန် Mansur Yavaşကသူ၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်မှသူ၏ကြေငြာချက်အားဖြင့် Metropolitan ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှငှားရမ်းငွေကိုနှစ်လရွှေ့ဆိုင်းထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသောအခါ၊ ငှားရမ်းခသည် Metropolitan မြူနီစီပယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ငွေပေးချေရာတွင်အခက်အခဲရှိသည့်တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများအားပေးရသည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်သန့်ရှင်းရေးအစီအမံများတိုးမြှင့်ပေးသောသာ။ လူနာနှင့်ဆွေမျိုးများနေထိုင်သည့် Etlik၊ Ruzgar, Varlik, Ulus နှင့် Oncology ရှိသနားကြင်နာတတ်သောအိမ် ၅ ခန်းပါဝင်သည်။
ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပိုးသတ်မှု 7/24 ဆက်လက်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးဌာန BELPLAS A.Ş. အဖွဲ့များသည်မြို့အနှံ့အပြားတွင်နေ့ရောညပါအလုပ်လုပ်နေစဉ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ၊ မီနီဘတ်စ်များနှင့်တက္ကစီများ၌နေ့စဉ်ပိုးသတ်ဆေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။
အမျိုးသားပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်မတ်လ ၁၆ ရက်မှ ၃၀ အတွင်းလေ့ကျင့်ခန်းနားချိန်ပြီးနောက် Metro, ANKARAY, Teleferik နှင့် EGO ဘတ်စ်ကားများ၌ခရီးသည်သိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွားပြီး EGO အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသည်နေ့စဉ်နံနက်ခင်းနှင့်ညနေခင်းဘတ်စ်ကားနာရီနှင့်နံပါတ်များတွင်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်နေသည်။
အင်ကာရာအူမမ်ရှိလက်မှုပညာနှင့်မော်တော်ယာဉ်များကုန်သည်များအသင်းအထွေထွေညီလာခံ၏ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူဖာရွတ်ကီလင်ဒါက“ ငါတို့ရဲ့မြူနီစီပယ်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မောင်းသူမဲ့ကုန်သည်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကူညီပေးတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖောက်သည်များ၏ကျန်းမာရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သောဤအလေ့အကျင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကျေနပ်အားရသည်။
အဓိကအားဖြင့်Güvenpark၊ Bentderesi နှင့် Sincan၊ Sincan Chauffeurs နှင့် Automobile Federation မှ President Isa Yalçınတို့ကမြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Mansur Yavaşအားဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များတွင်ပြုလုပ်သောပိုးမွှားလုပ်ငန်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
“ ကမ္ဘာမှာကပ်ရောဂါကြောင့်ငါတို့တိုင်းပြည်အတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုခံနေရတယ်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ငါတို့၏မြို့ပြမြို့တော်ဝန်အားနှစ်သက်တော်မူပါစေသော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်များကိုလုံးဝပိုးသန့်ဆေးနေကြသည်။ ဤအရာသည်ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်များကိုလည်းပိုးသတ်ဆေးများပါလိမ့်မည်။ ”
Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲဌာန၏အဖွဲ့များကကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစဉ်၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဟိုတယ်များ၊ အကြားအာရုံခန်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၏အဆောက်အ ဦး များ၊ ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ သူနာပြုများနေအိမ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများနှင့်အားကစားအသင်းများကိုပိုးမွှားနှိမ်နင်းခြင်းများမပြုလုပ်ပါ။ မြို့ပြဗေဒဌာနအဖွဲ့များသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဝင်နေရာများ၊ အထူးသဖြင့်လမ်းများ၊ လမ်းများနှင့် Boulevard များ၊ ဘုံinရိယာများနှင့်အပန်းဖြေနေရာများတွင်အသေးစိတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။
Ankara တွင် Coronavirus အတွက်အစီအမံအသစ်များ
Izmir ရှိ Coronavirus အားဆန့်ကျင်သောဆောင်ရွက်မှုများ
မြို့တော်ရှိ ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်ပြည်သူများအတွက်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပြီ .. !
လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်သေဆုံးမှုဆန့်ကျင်သစ်ကိုအတိုင်းအတာဝင်ရောက် TCDD လည်း, ရထားလမ်း။
Ankara ရှိ Coronavirus ကိုတိုက်ဖျက်ရန်နည်းလမ်းသစ်များ
သမိုင်း Capital ကိုအတ္တအီလက်ထရောနစ်ကဒ်စမတ်ကဒ်စနစ်လာဖွစျလာ
Kemal Choo Choo ၏မြို့တော်မှာရှိတဲ့မီးရထားပြပွဲ
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုမှုသည် Bursa တွင်ထက်ဝက်ကျသွားသည်
RayHaber 18.03.2020 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်စီးပွားဖြစ်အငှားယာဉ်များကို Coronavirus ကန့်သတ်ခြင်း